IMaple Street Cottage - I-Airbnb
IMaple Street Cottage
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguPreston
Imayile nje eyi-1 ukusuka kwi-I-40 kunye neekhilomitha ezi-2 ukusuka kwi-I-77, le ndlu incinci ilungiswa ngokutsha / ixhotyiswe ukuba ibe yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlala ubusuku bonke okanye iindwendwe zexesha elide. Ikhaya eligqibeleleyo kude nekhaya-uhambo olukhawulezayo ukuya kwiivenkile zokutyela zase-Statesville ezinembali.
Amagumbi okulala amabini atofotofo, igumbi lokuhlambela elihle kakhulu, igumbi lokuhlala elikhulu elinama-50 "umabonakude, ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokutyela elahlukileyo (okanye indawo yokusebenzela) iwasha, isomisi kunye nempahla yokuhlamba impahla, isantya esiphezulu se-Intanethi, umshicileli ongenazingcingo kunye nezixhobo zeofisi.
Isikhululo sekofu kubandakanya ikofu kunye neti. Yenza imbiza egcweleyo ngeCuisinart drip coffee maker okanye ikomityi enye ngeKeurig. Sikwabandakanya izinto ezimbalwa zesidlo sakusasa esilula. Izinto zesidlo sakusasa zanele ngentsasa yokuqala okanye ezimbalwa ... azibuyiselwa kwiindawo zokuhlala ixesha elide.
Njengeendwendwe rhoqo zakwa-Airbnb, simisela i-Maple Street Cottage phezulu ukuze sibe neempawu esizonwabelayo kuhambo lwethu. Siye sayila saza sabeka ixabiso lendawo yokuhlala ukuba ibe lixabiso elingcono kunye namava kunegumbi lehotele elihle eliphakathi kuluhlu. Uya kufumana izinto eziluncedo ezifana nezitishi zokutshaja ze-USB kwiindawo zokulinda ebusuku, yonke into oyifunayo ukuze uhlambe impahla, izinto zasekhitshini ezifana neswekile, ityuwa, ipepile, ioyile kunye neziqholo ezimbalwa. I-shampoo, ukuhlamba umzimba kunye nezixhobo zokuhambisa isepha ngesandla kwigumbi lokuhlambela.
4.99 out of 5 stars from 510 reviews
4.99 · Izimvo eziyi-510
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi510
Imaple sisitrato esisecaleni esithe cwaka. Thatha uhambo olumnandi lwemizuzu eli-10 (okanye umzuzu om-1 wokuqhuba) utyhutyha eyona ndawo intle yase-Statesville ukuya kutsho kwidolophu yase-Statesville eyimbali kwaye wonwabele ububele obungangxamanga kwidolophu esemazantsi. Kukho ukhetho oluninzi olulungileyo lokutyela, isibini esithengisa utywala kunye nenani leevenkile ekufanele uzijonge. Uya kufumana iindawo ezininzi ezinomculo ophilayo weThu-Sat kwaye ngamanye amaxesha phakathi evekini.
Umbuki zindwendwe ngu- Preston
Sihlala ebumelwaneni, kwaye sinokukunceda ngayo nayiphi na into oyifunayo, kodwa ukuhlonipha iindwendwe zinqwenela "ikhaya labo labucala kude nekhaya". Ngokubanzi, sinikezela ngeendwendwe ezibhukisiweyo ngekhowudi kwaye senze ukufika kube lula, ngaphandle kokudibana ngokobuqu... ngaphandle kokuba ungathanda. Kwabo bakhethayo, siya kukubonisa ngovuyo idolophu!
Sihlala ebumelwaneni, kwaye sinokukunceda ngayo nayiphi na into oyifunayo, kodwa ukuhlonipha iindwendwe zinqwenela "ikhaya labo labucala kude nekhaya". Ngokubanzi, sinikezela ngeen…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Statesville